Tarisiro yeIVD indasitiri
Mumakore achangopfuura, indasitiri in vitro kuongororwa (IVD) indasitiri yakura nekukurumidza. Sekureva kwedhata rakaburitswa neEvaluate MedTech, kubva pagore ra2014 kusvika 2017, musika wepasi rose wekutengesa weIVD indasitiri yakawedzera gore gore, kubva pamadhora makumi mana nemasere emadhora mazana mapfumbamwe emamiriyoni muna2014 kusvika kumadhora makumi mashanu nemaviri ...
Ndeupi musiyano uripo pakati pewutachiona hwekorona nyowani nefuruwenza
Parizvino, denda nyowani nyowani mamiriro ari imwe mushure meimwe. Autumn uye yechando ndiyo yakakwira zviitiko mwaka yezvirwere zvekufema. Iyo tembiricha yepasi inobatsira kupona uye kupararira kweiyo nyowani corona virus uye furuwenza hutachiona. Pane njodzi yekuti n ...
Maitiro ekuona zvirwere zvinotapukira
Iko kunowanzo kuve nemaitiro maviri ekuona zvirwere zvinotapukira: kutsvaga kweiyo pathogen pachayo kana kuona kweanodzivirira anogadzirwa nemuviri wemunhu kuramba hutachiona. Kutsvaga kwehutachiona kunogona kuona maantigen (kazhinji pamusoro mapuroteni ezvirwere, vamwe vanoshandisa ...